Imihlinzo: Indoda yeNdiya yanele yinkosikazi yayo, ifuna iDivorce ngoba imleqa right-through… - imihlinzo
Indoda yeNdiya yanele yinkosikazi yayo, ifuna iDivorce ekhawulezileyo ngoba imleqa right through…
Kukho indoda yase India enikwe iDivorce yinkundla eMombai emveni kokuba ifake isikhalazo esithi, “Ndicela ukwahlukana nalomfazi ngokuse mthethweni. Ayikho lento, ndilikhoboka apha. Lomfazi undlongo-ndlongo, ndilikhoboka, undixhinxa ngeepilisi, nemixube, nazo zonke izinto eziphantsi kweli langa. Andisalali ngulo mfazi, unditsibisa izoko rhoqo…akho busuku budlula nje.” 🙂
Kukho isibini esizithe Selfie nomhlobo waso oye wasweleka kuku gqithisa ekusebenziseni iziyobisi
Selfie with a corps
Esisibini sithe emveni kokuba kuye kwasweleka umhlobo waso, bathingaza bengazi ukuba baza kumthini. Baqonda ukuba mabamthathe bajikeleze naye bakhangele indawo abanokumlahla kuyo. Bathe bakuyi fumana phambi kokuba bamlahle bazithi selfie kunye naye, besaku gqiba bayi xhoma kuFacebook bamothula apho…
Kukhangelwa inenekazi eliphumelele onobuhle base Asia ngenxa yoku ngazi phathi kakuhle
New contest to find Miss Asia Pacific World 2014
Abaququzeli bolukhuphiswano (Miss Asia Pacific World 2014 pageant) bafake umngeni woku khangela elinenekazi liphumelele olukhuphiswano. Bathi elinenekazi alizi phathanga ngoku fanelekileyo, kwaye alikhange linyaniseke lisophule isivumelwano sendlela yokuzi phatha xa umntu ephumelele olukhuphiswano. Bathi maka buyise isixa asinikiweyo soku fakela amabele emboleko, kwakunye nesitshaba eso asizuzileyo.
Romance: Ndoda ithile yengesi ixakene neqabane layo eloyika ukubhabha bekude nekhaya
Couple stranded in Tunisia – fiance scared of flying
Lomfo ngemizamo yokuba romantic uzithe jize ngeholide, besingisa eTunisia neqabane lakhe. Nto nje usisiza aka koyiki ukubhabha…kude kwafuneka bamseze ipilisi ukuze babe bayahamba. Kuthe sele bekude nakhaya, besemafini lamfikela uloyiko. Bahamba ke bade bayoku fika apho bebe siya khona. Nto nje kuthe xa lisondela ixesha loku goduka, uvalo lwatsho njalo kusisiza. Kanga ngento yokuba kwafuneka belu bhekelisile olusuku ithuba elingange nyanga ngenxa yoko yika. Phofu kwade kwafuneka kuze umama weli gqiyazana lizoku mcenga ukuba makhwele lenqwelo moya bagoduke. Wala kwa phela…ethubeni bancamela kwinqanawe.
USakhza uthengisa omatshini nezanto kuthiwa ngoofunxa-uthuli. Afike kweli khaya anqonqoze, xa kuvulwa kuvula umakhulu. Ithi ingwenya, “Makhulu ndithengisa abamatshini boku cleaner phantsi.” Athi umakhulu, “Hayi nyana wam enkosi, sinalo icebo elisi sebenzelayo.” Ithi ngwenya, “Makhulu jonga, ubomi bakho baku tshintsha ngulo umtshini. Ubomi bakho bunga tshintsha mpela ngulo mtshini makhulu. Kanga’ba into endiza kuyenza kukho leplastic yobulongwe endiyi phetheyo apha. Ndifuna nje ukuku bonisa ukuba usebenza njani lomatshini. Ndiza buchitha apha phantsi, ndibu funxe uzoku zibonela indlela ophucuke ngayo lomtshini. Ukuba ayisebenzanga lento, ndixolele ukubutya ngokwam obubulongwe.” Athi umakhulu, “Hayi xhego ndonwabile ngulo ndinawo.”
Yeey, ityhoboze ingwenya ingene ngaphakathi ifuna ukubonisa lo makhulu ukuba usebenza njani lomtshini. Ekungeneni kwakhe abe sele khangela iplug ekufutshane, esaku gqiba achithe obubulongwe apha phantsi. Xa esithi ucofa umatshini lo ezama ukuwudumisa, cwaka umtshini…onyuse amehlo ebuza, “Mama kwenzeka ntoni na ngoku?” Makhulu aphendule, “Hayi yiload shedding…umbane oko ubumnkile uyaku buya ngomso. Ungasele usenza njalo ke…andithi ubuthe ukuba awunaku sebenza lomtshini wakho uyaku butya ngokwakho obubulongwe…?” Yeeey! 🙂 Nqi ulwazi lwaphela kwezo nkani zika Sakhza… 🙂
‹ Imihlinzo: Kukho ndoda ithile eye yasweleka ngenxa yokuba xhonti	› Imihlinzo: Indoda yase Kentucky isenga ityhefu kwiinyoka eziyi 500 ubuncinci ngeveki